आर्थिक अभावमा मृगौला पिडित अनिता घरमै थलिन् ,उपचारका लागि रकम संकलन गर्न युवाहरु जुटे
तनहुँको शुक्लागण्डकी-४ गल्छिना स्थित शान्ति टोल निवासी मृगौला पिडित अनिता सुवेदीको जीवन रक्षाका लागि स्थानिय युवाहरु जुटेका छन् । आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर घरमै थलिएकी सुवेदीको उपचारको लागि भन्दै स्थानिय दिपेश गुरुङ ,राजेश तिवारी र बसन्त हमालले सहयोग संकलन अभियान चलाएका छन् । उनीहरुले एक कप चिया छोडौँ, मृगौला पिडित सुवेदीको आयु जाडौँ भन्दै सवैसंग सहयोगको अपिल समेत गरेका छन् । शनिबार उनीलेहरुले शान्ति टोल देखि दुलेगौँडासम्म घरदैलो गरी सहयोग रकम संकलन गरेका थिए । शनिबार मात्रै ४७ हजार ६० रुपैयाँ रकम संकलन भएको बसन्त हमालले जानकारी दिए । यस अघि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सुवेदीको उपचारको लागि १० हजार र शान्तिटोल समितिले रु. ५ हजार ५ सय ५० रुपैया सहयोग गरेको थियो । ३२ बर्षिया अविवाहित सुवेदीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि उनको उपचारका लागि छिमेकी युवाहरुले रकम संकलनका लागि सांस्कृतीक कार्यक्रम देखि घरदैलो एवं विभिन्न सघ संस्थाहरुमा सहयोग बाकस राख्ने कार्यक्रहरु गर्ने रकम संकलन अभियानको अगुवाई गरेका गुरुङले वताए् । आइतबार यस क्षेत्रका विद्यालयहरुमा सहयोग संकलनका लागि बाकस राख्ने उनले बताए ।
दुई बर्ष अघि देखि नै सुवेदीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । तर विभिन्न अस्पतालमा जाँच गराए पनि उनको अवस्था उस्तै रह्यो । केही महिना अघि मात्र उनले गण्डकी मेडिकल कलेज, ओम हस्पिटलमा स्वास्थ्य जाँच गराएकी थिइन् । अन्तंत राष्ट्रिय मृगौला सेन्टर काठमाण्डौमा चेक जाँच गराएपछि दुवै मृगौला फेल भएको थाहा भएको थियो । दुई बर्ष अघि नै मृगौला खराब भइसकेको डाक्टरले भनेको सुवेदीले सुनाइन् । अहिले उनमा शरीर सुनिन्ने ,रिङगटा लाग्ने समस्या देखिएको छ । आर्थिक अभावकै कारण उनी घरमै थलिएर बसेकी छिन् । ५०/५५ बर्ष नाघेकी आमा र एक बहिनीसंग बस्दै आएकी सुवेदीको परिवारमा आम्दानी गर्ने कोहि छैन । डायलोसिस गर्न समेत जान नसकेकी सुवेदीलाई दमौलीमा डायलोसिस गर्नका लागि वडाले सिफारीस गरिदिएको छ । सुवेदीले सवैसंग सहयोगका लागि अपिल गरेकी छिन् । सुवेदीको सहयोगका लागि साँग्रिला विकास बैँकमा शान्तिटोल विकास संस्थाको खाता नं. ००२४००००११४३६९०००००१ मा जम्मा गर्न सकिने छ ।